Home - Oromia Technical and Vocational Education and Training Bureau
Building construction trainee at site.
Gamaggama rawwii karoora ji'a 6 bara 2012
Female trainers panel discussion
Entrepreneurship training at Adama
Entrepreneurship training at Adama city.
welcome to Oromia TVET Bureau
Oromia Technical and Vocational Education and Training Bureau is one of public institution among 32 Bureaus of Oromia Regional States established with the objective of producing lower and middle-level, competent, motivated, adaptable and innovative workforce in the Region, which can contribute to poverty reduction and social and economic development through facilitating demand-driven, high-quality technical and vocational education and training and transfer of demanded technology.
Currently, the Bureau has nearly 100 professional staffs at regional level and administering 176 public and 132 Private and totally 308 TVET Colleges in the region. Among these 24 of them are Poly Technic Colleges.
Artifishaal Intalijansii(AI): Jappaan keessatti roobootiiwwan hojii daldalaa eegaluufOctober 10, 2020Yeroo ammaa kanatti roobootiiwwan hojii dhalli namaa hojjetu sirnaan hojjetan arguun baratameera. Magaalaa guddoo Jappaan Tookyoo keessatti kan argamu giddu gala gabaa tokko keessatti roobootiin tokko suuqii keessa dhaabbattee hojiishee haalaan hojjechaa jirti. Roobootiin kun waan nama barbaadu hundaan nama tajaajilaa jirti. Dhugaatii namaaf hirti, lafaa kaastee bakka isaaf qophaa’erra ni keessi. Kophaamashee namaaf tajaajila kenniti, namoonni seenanii tajaajila argatanii ba’u, akkuma namaatti sosochootee si’aayinaan hojjetti. Roobootiin kun wayita hojii hojjettu waanuma akka namaa sammuudhaan yaaddu fakkaatti, garuu miti. Roobootiin sammuu uumamaa hin qabdu waan ta’eef. Namatu fageenya kiilomeetira fagoorraa ishee to’ata, kanaan sochooti. Namni roobootii kana to’atu meeshaa roobotittii itti dhiyeessee mul’isuu fi danaashee hundayyuu fidee fuuldurasaa kaa’u ‘virtual reality’ fayyadamuunidha. Roobootiin ‘Model-T’ jedhamtu kun kan kubbaaniyyaa Jappaan ‘Telexistance’ jedhamuuti. Dizaayiniin roobootii kanaas, akkaataa namoonni qaamaan bakka biraa osoo jiranii bakka fedhanitti hojii humna namaa barbaadu kamiyyuu hojjechuu akka danda’anitti kan hojjetameedha. Daarekatarri Boordii Kubbaaniyyaa kanaa Yuuchiroo Hikosaakaa, ”roobootittiin fakkeenya namaatiin kan hojjetamteedha” jedhan. ”Bakka jirtan teessanii roobootii kana fayyadamuun iddoo feetan deemuu dandeessu” jedhan daarektarichi. Hojiin teeknooloojii kun roobootii bilbilaan hojjetu yookiin ‘telerobotics’ jedhama. Roobootiiwwan fageenyarraa dhala namaan to’atamuun boombii darbachuuf fayyadan yeroo dheeraaf kan turan ta’us, wayita weerara koronaavaayirasii kanammoo roobootiiwwan nyaata mana namaatti namaaf geessan akkaasumas kanneen teeleedhaan hojjetan dhiyeenya kana haala kanneen duraarraa adda ta’een hojjetamaa jiru. ”Biyya uummannishee heddumminaan jaaraa jiran kan Jappaan kana keessatti hanqinni humna namaa mudataa jira. Keessattuu hojiiwwan galii xiqqoo argamsiisan keessatti rakkoon kun baayye mul’ata” jechuun rakkoo mudataa jiruuf kun furmaata akka ta’u dubbatan daarektarichi. Hojiiwwan qaamaan argamanii hojjechuun barbaachisan keessatti roobootiiwwan kunneen kumaatamaan ramaduun haga tokko rakkoo kana furuun ni danda’ama jedhan. Dhaabbileenis hojjettoota fageenyarraa roobootiiwwan kunneen to’atan heddumminaan qacaruun hojjechiisuu danda’u jedhan. Namni tokko amma magaalaa Tookyootti hojjetee daqiiqaa 10 boodammoo magaalaa Okaayidoo keessaa hojjechuu danda’a, osoo geejjibaan imaluu hin barbaachisne bakka garaagaraatti hojjechuun ni danda’ama” jedhan. Namoonni roobootii kana hojjechiisan jalqaba oonlaayinii iddoo gabaan itti gaggeeffamu interneetii saaqanii seenu, isa booda waan gurguruu fi bituu barbaadan karaa ‘virtual reality’ roobootii ajajuun akka socho’anii hojjetan godhu. Ibsa waa’ee suuraa,Namni tokko roobootiiwwan bakka garaagaraa jiran bakka tokko taa’ee to’achuu danda’a “Yaadi kun keessumaa haala amma keessa jirruuf abdii kan uumuudha. Sababni isaas namoonni walitti dhufeenyaa fi wal-tuttuqqaa yoo hir’isan yaaddoo koronaavaayirasiis akkasuma hir’isa waan ta’eef.” jedhu daarektarri kun. Teeknooloojiin kun rakkoo furamuu qabu kan mataasaa qabaachuus hin haalle. Roobootiin kun saffisa akka namaa qabaachuu dhabuu akkasumas meeshaan ittiin roobootiiwwan to’atan yeroo dheeraa booda miira namaa kan gadi buusuu fi kan nama raatessu ta’uu himaniiru. Kanaafis waahillan isaanii waliin ta’uun hojjechaa jiraachuu himaniiru. Maddii oduu BBC Afaan Oromoti... Read more...
Teekinooloojiin ogeessota Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtiif Odeeffannoo Oromiyaafi Biiroo BLTO Oromiyaatiin waraabame daawwatame.June 5, 2020 Teekinooloojiin ogeessota Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Qunnamtiif Odeeffannoo Oromiyaafi Biiroo BLTO Oromiyaatiin waraabame daawwatame. ———————————————————————————- Biiroon BLTO Oromiyaa teekinooloojii bu’aqabeessummaan isaa mirkanaa’e waraabuu, fooyyessuufi kalaquun rakkoo hawaasa naannichaa furuuf hojiilee garaagaraa raawwachaa tureera. Bara kanas Abbaa Taayitaa Saayinsii, Teekinooloojii, Quunnamtiifi Odeeffannoo Oromiyaa waliin ta’uun dookumantii ogeessota Abbaa Taayitichaan dhiyaatan bu’uura godhachuun teekinooloojiiwwan rakkoolee interpiraayizoota bu’aa gogaa irratti bobba’anii jiran mudatan furuuf gargaaran lama “Manual Logo Stamping” fi “Heat Reactivator” Kolleejjota BLTO Oromiyaa’tiif ceesisuuf meeshaaleen teekinooloojii kanneen hojjechuuf barbaachisan guutamuun Kolleejjii Poolii Teeknika Adaamaa keessatti hojiin teekinooloojiiwwan kanneen waraabuu hojjetamaa tureera. Hojiin teekinooloojii waraabuu gaggeeffamaa ture kunis guyyaa har’aa hooggantoota Biiroo BLTO Oromiyaafi hoggantoota Abbaa Taayitichaatiin daawwatamee jira. Kaayyoon daawwannichaas hojiilee teekinooloojiiwwan lamaan waraabuu irratti hanga ammaatti raawwataman daawwachuun wantoota fooyya’uu qabaniifi qaamolee bira gahuu qaban bira haala kamiin geessisuun akka danda’amurratti marii’achuuf akka ta’e hubatameera. Kallattii hojii garafuulduraa kan kaa’an hogganaan Biiroo BLTO Oromiyaa obbo Eebbaa Garbaa ogeessota dandeettii, beekumsaafi humna isaanii osoo hinqusatiin yeroo yaaddessaafi hammaataa kana keessatti teekinooloojiiwwan kanneen waraabuu irratti hirmaatan galateeffachuun, fuulduratti carraa hojii bal’aa uumuuf teeknooloojii waraabame kana qaama oomishu bal’inaan horachuufi warreen teeknooloojicha bitanii itti fayyadamaniif immoo ‘user manual’ qopheessuun barbaachisaa ta’uu eeraniiru. Akkasumas, qindoomina cimaan hojjechuun ogeessota hojjechuu danda’an qabnu kanatti fayyadamnee rakkoo hawaasa keenyaa furuuf xiiqiin hojjechuun murteessaa ta’uu addeessaniiru. Yoo kaka’umsa amma jiruun cimnee hojjenne waraabuu keessaa baanee ofii keenyaa kalaquudhaan hojjechuun akka danda’amu ibsuun, teekinooloojii waraabame kana istaandaardii isaa eeguun sochoostota IMXaalee naannoo keenya jiraniif ceesisuun hojii itti fufiinsaan hojjetamu ta’uus kallattii kaa’anii jiru.... Read more...
Oromia center of competence(coc)
Archives Select Month October 2020 June 2020
July 7, 2022, 10:38 am